Toetran-dahy ao anatin’ny fototarazoko sy ny jeans-ko · Global Voices teny Malagasy
Toetran-dahy ao anatin'ny fototarazoko sy ny jeans-ko
Toetran-dahy tsy mifanaraka amin'ny ilaina, afaka ahitsy toy ny jeans
Voadika ny 14 Oktobra 2020 15:24 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, Ελληνικά, Español, 한국어, 日本語, polski, عربي, Deutsch, English
Jeans sary an'i Jason Leung tao amin'ny Unsplash.
Nivoaka voalohany tao amin'ny Promundo, ity lahatsoratra ity, momba ny “/masc: resadresaka momba ny toetran-dahy ao anatin'ny vaninandro maoderina.” Nahazoana alàlana ny dika nokiraina sy navoaka eto ambany.
“Mba lehilahy !” hoy ilay manampahefana iray avy amin'ny polisy, rehefa tsapany fa tsy namaly mazava sy mafy ny fanontaniany ilay namako. Nanontany azy momba ny savorovoro iray henony resahana tamin'io Zoma tolakandro io sy ny ady saiky rafitra teo akaikin'ny sekoly ianarako ilay manampahefana. Ery ambonimbony kokoa amin'ilay arabe, miandry anaty fahanginana eo amin'ny sisin-dàlana no mijoro ireo ankizilahy misalotra ny fanamiana maha-mpianatra azy ireo, milanja tapa-by, takelaka hazo, rojo famatorana alika, tavoahangy avy amin'ireo mpivarotra teo an-tanàna ary antsy, vonona ny hiady. Diso sondriana loatra “te-hiseho ho lehilahy” ireo zazalahy ireo, izay teo anelanelan'ny 15 sy 16 taona.
Zavatra iray mampihomehy ny teny. Ny fampianarana manara-drafitra dia mampianatra antsika hifehy ny anglisy fampiasa andavanandro. Any anatin'ny kilasy fianarana literatiora sy fiteny anglisy, amin'ny alàlan'ny fanitsiana sy ny fitanisàna andalan-tononkalo, amporisihana isika ho lasa “lehilahin'ny saranga antonony, nahita fianarana ary afaka tamin'ny fanandevozana”. Saingy ireo tovolahy izay mahay ny fitenim-pireneny kosa (“Kreola”) dia tsy misy fotoana ho atokana ho an'izay tsy mampiasa afa-tsy fiteny anglisy fampiasa andavanandro; takian'izy ireo ny tsirairay mba hijoro ho “tena lehilahy avy amin'ity kolontsaina sy ity tany ity”.
Ny fiovàna sata dia niankina indrindra tamin'ny toerana ara-piarahamonina niavian'ilay olona iresahanao. Indray andro, noho izy ireo “nanao fihetsika nampiahiahy”, ary mba hisavàna azy ireo dia nisy pôlisy roa nandahatra tovolahy maromaro hiankina rindrina teny an'arabe. Nobaikoan-dry zareo ireo tovolahy mba hanao ny tànany eny ambony loha sy handohalika, no sady notondroin-dry zareo tamin'ny basiny ny tavan'ireo tanora. Tamin'ny antsipirihany no nitantaran'ny iray tamin'ireo tovolahy ny fihetsika, tamin'ny fiteny anglisy fampiasa andavanandro, mba hanehoana hoe narahany tsara sy tamim-pananjàna ireo baiko. Ny valiny azony, “Fa maninona no toy izany no firesakao? Bandy ve no ankafizin'ialahy sa ahoana e? Tsy nahavita niaro io tovolahy io ny fiteny anglisy fampiasa andavanandro — izay noheverina hanavaka azy amin'ireo mahantra, olona tsy nandia fianarana, olona heverina fa marefo kokoa mety hiharan'ny herisetran'ny mpitondra.
Tsy nipetraka velivaly aho ary nanoratra izay heveriko ho dika omeko ny hoe lehilahy. Tsy nahafantatra aho hoe hay ve nisy ny teny hoe “toetran-dahy”— izay mahafehy ireo famaritana sy fitsaratsaram-poana ny atao hoe “lehilahy lehibe” sy mety hiova arakaraky ny olona tsirairay, miankina amin'ny fotoana sy ny zavatra mitranga. Nanery anay ilay trerona mba “hijoro ho lehilahy” tamin'ny fiheverana fa ny fototarazo (ADN) maha-lahy dia efa mikoriana ao anatinay sahady, saingy mazàna no miandry fotoana fotsiny mba hihetsehana.
Ny hoe “mijoro ho lehilahy” dia mitaky aminay fihenjanana, fahatokisantena, mitàna ny fibaikoana ary mahay manindry. Saingy ny toetran-dahy dia hevitra iray avy amin'ny maha-lehilahy lehibe ezahan-dry zareo hanefena anay, toy ny fampifanarahana ny vatantsika ho tafiditra ao anaty pataloha jeans iray. Ireny jeans natao ho an'ny toetran-dahy ireny dia efa an-taona maro no natolotra ahy. Ny fomba fijery ny fotoana, indrindra fa ny tahotra ny “ho very fotoana”, dia tena zavadehibe ho an'ny lehilahy lehibe. Ny kolontsaina ao anatin'ny fanjakan-dehilahy dia manosika ireo tovolahy ho lasa lehilahy lehibe haingana araka izay tratra.
Katsahan'ireo tovolahy ny fankatoavan'ireo mitovy aminy sy ireo lehilahy efa zokinjokiny mba hanamafisany tsy miato ny “maha-henjana” an-dry zareo. Io, amin'ny ampahany, no manosika ireo habibiana eny anatin'ny resaka imasom-bahoaka anenjehana ireo tokantrano tsy misy afa-tsy vehivavy tokantena no miahy azy. Ireo tovolahy dia mitombo ao anatin'ny fianarana manome tsiny ny reniny ho tsy mba nitantana an-dry zareo ho amin'ny làlan'ny maha-lehilahy tamin'ny fotoana tokony nanaovana izany. Ny sasany amin'ireo “zanakalahin'i màmany” izay hatry ny ela no nojerena ho toy ny nahazo fiahiana tsara sy ohatra ho an'ny vehivavy, dia afaka atsy aoriana kely, mandà io fitarihana (fampianarana) io. Endrika iray amin'ny “fanomezana tsiny ny vehivavy” ao anatin'ny fiarahamonintsika io.
Fa ireo reny dia afaka ihany koa mahazo tombony ao anatin'ny fanjakan-dehilahy, izay tombony mety haningotra azy ireo sy ny zanany lahy. Kanefa, rehefa zohiana dia tsy vitan'ireo vehivavy loatra ny mitaiza amin'ny fomba mahomby ireo zanany lahyn toy ny vitan'ny kolontsaina misy tsindrin-dehilahy— tsy raharaham-behivavy ny herisetra sy fifandirana tarihan'ireo lehilahy, ny herisetra ara-nofo atao amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy, ary ny fandraisana fepetra feno herisetra atao amin'ny kolontsaina pelaka eny amin'ireo habaka sôsialy sy ara-panjakana. Ivon'io adihevitra io ny hoe ireo lehilahy dia misitraka habaka sy traikefa sosialy mifanohitra amin'izay lazain'ny kolontsaina ibahanan'ny lehilahy toerana, no sady mikolokolo tahotra lalina ho toy ny olona marefo tsy afaka ny handray anjara ao anatin'ireny tontolo ireny sy, rehefa atambatra, mahatsapa ho tsy tsara tefy mba hiatrika ireny tontolon'ny fanjakan-dehilahy ireny.
Nisy vono olona nihoatra ny 500 tao Trinidad&Tobago tato anatin'ny taona roa farany. Mazava ho azy, tsy misy mihitsy fanjakàna haniry ny hisiana olana ateraky ny heloka bevava ao aminin'ny taniny, saingy ny valinkafatra avy amin'ny fanjakàna dia ny manipy foana ny andraikitra ho any amin'ny vahoaka ho tsy ampy fanajàna ny maoraly ary ny kolontsain'ny fitaizàna tsy miraharaha ataon'ny ray aman-dreny izay heverina ho toy ny taninketsa niteraka ny famarotana an-tsokosoko zavamahadomelina sy basy nanerana ny firenena, nitarika ihany koa ny fanaovana kolikoly eny anivon'ny orinasa rehefa hanao fifanarahana asa, nitondra ho amin'ny fiforonana andian-jiolahy eny anivon'ny fiarahamonina sahirana any an-tanandehibe, ary ny fitomboan'ny “vondrom-piarahamonina manidy vavahady” mba hametrahany tsipika mametra ny elanelana ara-tsôsialy eo amin'ireo saranga, ny fisiana ara-tsôsialy ary ny fahafaha-manao zavatra. Taratry ny tsy fetezan'ny fihodin'ny pôlitika ary ny tsy fahampian'ny fahafahan'ny fanjakàna mametraka fitoniana ho an'ny vahoaka, amin'ny ankapobeny dia toa mandeha tsy misy mpahita ny vono olona, ny fanolanana, ny herisetran'ny pôlisy ary ny habibiana ao anaty fiarahamonina, no sady tsy misy bedy. Ny tsara indrindra azontsika atao sisa, amin'ny maha-vahoaka, dia ny mahatsiaro ireo havantsika nodimandry mba hamerenana amin'ny laoniny ny lanjan'ny aina maha-olombelona, ary mampihanjahanja ny asa tsy vitan'ny fanjakàna.
Ireo lehilahy fadiranovana izay nandatsaka aina ny olona niarahany koa dia betsaka loatra tsy hita ho tanisaina intsony. Tamin'ny tranga iray tamin'ny Janoary lasa teo, rehefa niezaka ny hanavotra ny ainy hiala tamina fiarahana iray mampididoza ny vehivavy iray, nandehanan'ilay rangahy niarahany taloha tany amin'ny toerana fiasàny, rehefa avy nilàny vaniny am-bolana maro tety anaty tambajotra ilay ramatoa, ary dia notifiriny in-droa. Namono tena rangahy io avy eo. Nanodidina ny tamin'ny 8:00 maraina tamin'izay, fotoana fandraisan'ny sasany amintsikja ny kafe iray kaopiny, ny sasany kosa efa eny an-dàlana handeha hamonjy ny asany, ary ny ankizivavy sasany mpianatra indray dia mitily ny endrik'ireo lehilahy eny amin'ny toerana fandraisana taxi, alohan'ny handraisana fanapahankevitra hoe taxi itsy na iroa no horaisina: “Iza no tsy mampahatahotra indrindra?” “Efa nisy nahitako azy io tany aloha” “Tsy hoe satria efa antitra izy dia tsy ho lasa mpanolana ahy.” Manodidina ny tamin'ny 8:00 maraina, mamily fiara aho mamonjy sekoly. Mampaneno anjomara in-dray mandeha aho rehefa mahita vehivavy tsara tarehy, in-droa raha tena mampivanàka ahy izy, no sady hitako ho manaitaitra filàna (“bess”) ka tsapako ho misy filàna izany ato amiko hanototra ny ampongan-tsofiny sy ny fahatoniany amin'ny feon'ny filàm-baniiny. Raha tsy hitanao ny antony mahatonga ireny fomba fanao andavanandro ireny ho tonga any amin'ny fahafatesana vehivavy, dia efa safidy ny anao ny tsy hiraharaha ny zavatra fonosina sy afenin'ny atao hoe “maha-lehilahy”.
Io no antony mahatonga ny fanontaniana hoe “Aiza ireo lehilahy?” apetrak'ireo vehivavy rehefa manao diabe mitaky ny zony mba ho ekena sy ho arovan'ny fanjakàna ary ireo olontsotra mpikambana ao anatin'ny fiarahamonina. Mba hahafahana mino marina ilay hiaka fitakiana fanonerana, tena vitsy loatra ho anay ireo mpanao diabe, ny fanehoana firaisankina avy amin'ny daholobe, ary ireo namana : “Tsy ny lehilahy rehetra dia ratsy avokoa.” Misy ireo lehilahy sasany mitondra ny fiainany manaraka ny “làla-marina”— manolotra fitiavana mampitolagaga ho an'ireo zanany vavy ary « eo mandrakariva» ho an'ny ankohonany. Eny, tsy ny lehilahy rehetra dia ratsy avokoa, saingy marobe no mikombom-bava, ary vitsy kely ireo azo ianteherana amin'ny tolona hisian'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy.
Angamba ireo lehilahy izay mila mampiaka-peo sy mihetsika dia mbola seriny amin'ny fiahiana sy fikarakaràna, miezaka ny manidy ireo jeans tsy izy sy/na mijanona manakombom-bava, tsy miraharaha ireo haratsian-toetra tsy tapaka ao ambadik'io fomba fitafy io. Rehefa ny toetra henjankenjana maha-lehilahy no heverina ho lova nentin'ny taona nifandimby, toy zava-mahafaty ho an'ny zanak'olombelona ny zava-marina tsy azo ovàna sy tsy azo ialàna eto amin'izao tontolo izao. Tsy maintsy misafidy isika, isika amin'ny maha-isika antsika ary koa safidy pôlitika. Afaka ariana any izay jeans, ary amin'ny fotoana rehetra, indrindra fa rehefa tsy antonona intsony izy ireny, na efa tonta, ary izany — toy ny toetran-dahy ao amintsika ihany — dia andraikitsika sy fahalalahantsika ny manao azy.